ပငျစငျ ခံစားပိုငျ ခှငျ့ အကွောငျး (မြားမြားရှယျထားပေးပါအုံး …) – Let Pan Daily
ပငျစငျ ခံစားပိုငျ ခှငျ့ အကွောငျး (မြားမြားရှယျထားပေးပါအုံး …)
လြော့ေ ပါ့ပငျစငျအသကျ ၅၅ နှဈပွညျ့ပွီး လုပျသကျ ၂၀ နှဈကြျောလြှငျ သျောလညျးကောငျး အသကျ ၅၀ နှဈပွညျ့ပွီး လုပျသကျ ၂၅ နှဈ ကြျောလြှငျလညျးကောငျး ခံစားခှငျ့ရှိသညျ။
ပငျစငျဟူသောစကားရပျတှငျ ပငျစငျ+လုပျသကျဆုငှေ ဖွဈပါသညျ။
၁. သကျပွညျ့ပငျစငျ ဝနျထမျး သညျ အသကျ ၆၀ ပွညျု့သညျ့နတှေ့ငျအငွိမျးစားယူရမညျဖွဈသညျ။ အမြားဆုံးလုပျသကျမှာ အသကျ ၁၈ နှဈမှ ၆၀ ထိ ဖွစိပါသညျ။အငွိမျးစားယူရနျ ကွိုတငျပွငျဆငျခှငျ့ ၄ လ ခံစားခှငျ့ရှိပွီး ပြှမျးမြှလစာ ခံစားရမညျ။ ( လစာနှုနျးတိုးမွှငျ့သညျ့အခြိနျတှငျ သီးသနျ့ညှနျကွားခကျြနှငျ့အညီ ခံစားခှငျ့ရှိသညျ။)
၂. နှဈပွညျ့ပငျစငျ – အသကျ ၅၅ နှဈပွညျ့ပွီး လုပျသကျနှဈ ၃၀ ပွညျ့လြှငျ ခံစားခှငျ့ရှိသညျ။
၃. လြော့ပေါ့ပငျစငျ – အသကျ ၅၅ နှဈပွညျ့ပွီး လုပျသကျ ၂၀ နှဈကြျောလြှငျ သျောလညျးကောငျး အသကျ ၅၀ နှဈပွညျ့ပွီး လုပျသကျ ၂၅ နှဈကြျောလြှငျလညျးကောငျး ခံစားခှငျ့ရှိသညျ။
၄. နာမကနျြးပငျစငျ – လုပျသကျ ၁၀ နှဈနှငျ့အထကျ မကနျြးမာ၍ တာဝနျ ဆကျလကျထမျးဆောငျနိုငျခွငျး မရှိသညျ့အခါ သတျမှတျထားသညျ့ ဆေးအဖှဲ့၏ ထောကျခံခကျြဖွငျ့ ခံစားခှငျ့ရှိသညျ။
၅. လြျောကွေးပငျစငျ – ရာထူးတဈခုကိုဖကျြသိမျးလိုကျသညျ့အခါ အခွားရာ ထူးတဈခုသို့ ပွောငျးရှနေ့ရောခထြားခွငျးမပွုနိုငျလြှငျသျောလညျးကောငျး ယငျးဝနျထမျးမှ ပွောငျးရှတေ့ာဝနျထမျးဆောငျရနျဆန်ဒမပွု လြှငျ သျောလညျးကောငျး ခံစားခှငျ့ရှိသညျ။
၆.အထူးပငျစငျ – တာဝနျထမျးဆောငျမှုကို အကွောငျးပွု၍ ရောဂါရရှိသညျ့အခါတှငျဖွဈစေ ထိခိုကျအနာတရ ဖွဈသညျ့အခါတှငျဖွဈစေ မသနျစှမျးဖွဈသညျ့အခါတှငျဖွဈစေ သတျမှတျထား သောဆေးအဖှဲ့၏ ထောကျခံခကျြဖွငျ့ ခံစားခှငျ့ရှိသညျ။
၇. မိသားစုပငျစငျ – ဝနျထမျးသညျ တာဝနျထမျးဆောငျဆဲဖွဈစေ၊ အငွိမျးစားယူပွီးနောကျမှ ဖွဈစကှေယျလှနျခဲ့လြှငျ ကနျြရဈသူမိသားစုအတှကျသတျမှတျခကျြနှငျ့အညီ ခံစားခှငျ့ရှိသညျ။ ပငျစငျအကြိုးခံစားခှငျ့ရှိသညျ့ လုပျသကျ ၁၀ နှဈ မပွညျ့ပါက လုပျသကျဆုငှေ တဈမြိုးတညျးကို ခံစားခှငျ့ရှိသညျ။လုပျသကျ ၅ နှဈ မပွညျ့သညျ့ကိစ်စ
လုပျသကျ ၅ နှဈပွညျ့ပွီး ၁၀ နှဈမပွညျ့သေး သညျ့ကိစ်စ
ပငျစငျအကြိုးခံစားခှငျ့ရှိသညျ့လုပျသကျ ၁၀ နှဈနှငျ့အထကျ (သကျပွညျ့၊ နာမကနျြး၊ လြျောကွေး)ပငျစငျနှငျ့ နှဈပွညျ့၊ လြော့ပေါ့ ပငျစငျ တို့၏ ပငျစငျလစာတှကျနညျး
မိသားစုပငျစငျကို ယဘေူယြ အားဖွငျ့
အငွိမျးစားကှယျလှနျသညျ့နရေ့ကျ၏ နောကျနရေ့ကျမှ ခံစားခှငျ့ရှိသညျ။ တရားဝငျ ဇနီး(သို့) ခငျပှနျးကှယျလှနျသညျအထိ ခံစားခှငျ့ရှိ။ အငွိမျးစားယူခြိနျ၌ ရရှိသညျ့ပငျစငျလစာ ၏ ၃/၄အခွားမိသားစုဝငျ ဖွဈပါက ဝနျထမျးကှယျလှနျသညျ့နရေ့ကျမှစ၍ ၁၅ နှဈအထိ ခံစားခှငျ့ရှိသညျ။ အငွိမျးစားယူခြိနျ၌ ရရှိသညျ့ပငျစငျလစာ၏ ၁/၂မိသားစု ပငျစငျအတှကျ လုပျသကျဆုငှေ ၁ နှဈပွညျ့ပွီး ၅ နှဈအောကျ လုပျသကျတဈနှဈအတှကျ နောကျဆုံးထုတျလစာ တဈလစာနှငျ့ညီမြှသော လုပျသကျဆုငှေ ၅ နှဈပွ ညျ့ပွီး ၁၀ နှဈ အောကျ နောကျဆုံးထုတျလစာ၏ ၁၂ဆနှငျ့ညီမြှသော လုပျသကျဆုငှေ
ရာထူးမှနုတျထှကျသညျ့ဝနျထမျး ဝနျထမျးအဖွဈမှ ထုတျပဈခွငျး ရာထူးမှထုတျပယျခွငျးခံရသညျ့ဝနျထမျးတို့သညျ ပငျစငျ/လုပျသကျဆုငှေ ခံစားခှငျ့မရှိပါ။ ပငျစငျစားသညျ ထောငျကခြွငျး ခံရပါက ပငျစငျခံစားခှငျ့ကို ရပျဆိုငျးထားရမညျ။လှတျမွောကျလာပါက ပွနျလညျခှငျ့ပွု သျောလညျးပွဈဒဏျကြ ကာလအတှကျ ပငျစငျလစာ ခှငျ့မပွု။ ဘဏ်ဍာရေးဝနျကွီးဌာနက သတျမှတျခှငျ့ပွုထားသညျ့ နှုနျးထားအတိုငျးတဈလုံးတဈခဲတညျး ပငျစငျအဖွဈ လဲလှယျခှငျ့ရှိ။ ပငျစငျနှငျ့ လုပျသကျဆုငှတှေကျနညျးကို ဘဏ်ဍာရေးဝနျကွီးဌာနမှ ပွညျထောငျစုအစိုးရအဖှဲ့၏ သဘောတူညီခကျြဖွငျ့ အမိနျ့ထုတျပွနျခွငျး၊ပွငျဆငျခွငျးပွုနိုငျသညျ။
လျော့ေ ပါ့ပင်စင်အသက် ၅၅ နှစ်ပြည့်ပြီး လုပ်သက် ၂၀ နှစ်ကျော်လျှင် သော်လည်းကောင်း အသက် ၅၀ နှစ်ပြည့်ပြီး လုပ်သက် ၂၅ နှစ် ကျော်လျှင်လည်းကောင်း ခံစားခွင့်ရှိသည်။
ပင်စင်ဟူသောစကားရပ်တွင် ပင်စင်+လုပ်သက်ဆုငွေ ဖြစ်ပါသည်။
၁. သက်ပြည့်ပင်စင် ဝန်ထမ်း သည် အသက် ၆၀ ပြည်ု့သည့်နေ့တွင်အငြိမ်းစားယူရမည်ဖြစ်သည်။ အများဆုံးလုပ်သက်မှာ အသက် ၁၈ နှစ်မှ ၆၀ ထိ ဖြစိပါသည်။အငြိမ်းစားယူရန် ကြိုတင်ပြင်ဆင်ခွင့် ၄ လ ခံစားခွင့်ရှိပြီး ပျှမ်းမျှလစာ ခံစားရမည်။ ( လစာနှုန်းတိုးမြှင့်သည့်အချိန်တွင် သီးသန့်ညွှန်ကြားချက်နှင့်အညီ ခံစားခွင့်ရှိသည်။)
၂. နှစ်ပြည့်ပင်စင် – အသက် ၅၅ နှစ်ပြည့်ပြီး လုပ်သက်နှစ် ၃၀ ပြည့်လျှင် ခံစားခွင့်ရှိသည်။
၃. လျော့ပေါ့ပင်စင် – အသက် ၅၅ နှစ်ပြည့်ပြီး လုပ်သက် ၂၀ နှစ်ကျော်လျှင် သော်လည်းကောင်း အသက် ၅၀ နှစ်ပြည့်ပြီး လုပ်သက် ၂၅ နှစ်ကျော်လျှင်လည်းကောင်း ခံစားခွင့်ရှိသည်။
၄. နာမကျန်းပင်စင် – လုပ်သက် ၁၀ နှစ်နှင့်အထက် မကျန်းမာ၍ တာဝန် ဆက်လက်ထမ်းဆောင်နိုင်ခြင်း မရှိသည့်အခါ သတ်မှတ်ထားသည့် ဆေးအဖွဲ့၏ ထောက်ခံချက်ဖြင့် ခံစားခွင့်ရှိသည်။
၅. လျော်ကြေးပင်စင် – ရာထူးတစ်ခုကိုဖျက်သိမ်းလိုက်သည့်အခါ အခြားရာ ထူးတစ်ခုသို့ ပြောင်းရွှေ့နေရာချထားခြင်းမပြုနိုင်လျှင်သော်လည်းကောင်း ယင်းဝန်ထမ်းမှ ပြောင်းရွှေ့တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်ဆန္ဒမပြု လျှင် သော်လည်းကောင်း ခံစားခွင့်ရှိသည်။
၆.အထူးပင်စင် – တာဝန်ထမ်းဆောင်မှုကို အကြောင်းပြု၍ ရောဂါရရှိသည့်အခါတွင်ဖြစ်စေ ထိခိုက်အနာတရ ဖြစ်သည့်အခါတွင်ဖြစ်စေ မသန်စွမ်းဖြစ်သည့်အခါတွင်ဖြစ်စေ သတ်မှတ်ထား သောဆေးအဖွဲ့၏ ထောက်ခံချက်ဖြင့် ခံစားခွင့်ရှိသည်။
၇. မိသားစုပင်စင် – ဝန်ထမ်းသည် တာဝန်ထမ်းဆောင်ဆဲဖြစ်စေ၊ အငြိမ်းစားယူပြီးနောက်မှ ဖြစ်စေကွယ်လွန်ခဲ့လျှင် ကျန်ရစ်သူမိသားစုအတွက်သတ်မှတ်ချက်နှင့်အညီ ခံစားခွင့်ရှိသည်။ ပင်စင်အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသည့် လုပ်သက် ၁၀ နှစ် မပြည့်ပါက လုပ်သက်ဆုငွေ တစ်မျိုးတည်းကို ခံစားခွင့်ရှိသည်။လုပ်သက် ၅ နှစ် မပြည့်သည့်ကိစ္စ
လုပ်သက် ၅ နှစ်ပြည့်ပြီး ၁၀ နှစ်မပြည့်သေး သည့်ကိစ္စ
ပင်စင်အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသည့်လုပ်သက် ၁၀ နှစ်နှင့်အထက် (သက်ပြည့်၊ နာမကျန်း၊ လျော်ကြေး)ပင်စင်နှင့် နှစ်ပြည့်၊ လျော့ပေါ့ ပင်စင် တို့၏ ပင်စင်လစာတွက်နည်း
မိသားစုပင်စင်ကို ယေဘူယျ အားဖြင့်
အငြိမ်းစားကွယ်လွန်သည့်နေ့ရက်၏ နောက်နေ့ရက်မှ ခံစားခွင့်ရှိသည်။ တရားဝင် ဇနီး(သို့) ခင်ပွန်းကွယ်လွန်သည်အထိ ခံစားခွင့်ရှိ။ အငြိမ်းစားယူချိန်၌ ရရှိသည့်ပင်စင်လစာ ၏ ၃/၄အခြားမိသားစုဝင် ဖြစ်ပါက ဝန်ထမ်းကွယ်လွန်သည့်နေ့ရက်မှစ၍ ၁၅ နှစ်အထိ ခံစားခွင့်ရှိသည်။ အငြိမ်းစားယူချိန်၌ ရရှိသည့်ပင်စင်လစာ၏ ၁/၂မိသားစု ပင်စင်အတွက် လုပ်သက်ဆုငွေ ၁ နှစ်ပြည့်ပြီး ၅ နှစ်အောက် လုပ်သက်တစ်နှစ်အတွက် နောက်ဆုံးထုတ်လစာ တစ်လစာနှင့်ညီမျှသော လုပ်သက်ဆုငွေ ၅ နှစ်ပြ ည့်ပြီး ၁၀ နှစ် အောက် နောက်ဆုံးထုတ်လစာ၏ ၁၂ဆနှင့်ညီမျှသော လုပ်သက်ဆုငွေ
ရာထူးမှနုတ်ထွက်သည့်ဝန်ထမ်း ဝန်ထမ်းအဖြစ်မှ ထုတ်ပစ်ခြင်း ရာထူးမှထုတ်ပယ်ခြင်းခံရသည့်ဝန်ထမ်းတို့သည် ပင်စင်/လုပ်သက်ဆုငွေ ခံစားခွင့်မရှိပါ။ ပင်စင်စားသည် ထောင်ကျခြင်း ခံရပါက ပင်စင်ခံစားခွင့်ကို ရပ်ဆိုင်းထားရမည်။လွတ်မြောက်လာပါက ပြန်လည်ခွင့်ပြု သော်လည်းပြစ်ဒဏ်ကျ ကာလအတွက် ပင်စင်လစာ ခွင့်မပြု။ ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနက သတ်မှတ်ခွင့်ပြုထားသည့် နှုန်းထားအတိုင်းတစ်လုံးတစ်ခဲတည်း ပင်စင်အဖြစ် လဲလှယ်ခွင့်ရှိ။ ပင်စင်နှင့် လုပ်သက်ဆုငွေတွက်နည်းကို ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့၏ သဘောတူညီချက်ဖြင့် အမိန့်ထုတ်ပြန်ခြင်း၊ပြင်ဆင်ခြင်းပြုနိုင်သည်။
လူပွောမြား နကွေတဲ့ Test kit တှေ အကွောငျး .. (မြားမြားရှယျထားပေးပါအုံး …)
ကိုဗစ် လူနာ များတွင် သုံးပုံ တစ်ပုံ သည် ကျောက် ကပ် ပျက်စီး သွားကြောင်း ပညာရှင်များ လေ့လာတွေ့ရှိ
R2P ကိစ်စ ကလညျးဟော့နတေော့ ဒီစာစု ကို ကွိုဖတျ ထားသငျ့ပါတယျ